U-Brook Rothshank usisa kwizinto ezincinci kwipeyinti yakhe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Incinci kumzobo we Brook Rothshank
Nge Brook Rothshank siphambi komculi ngubaniKwiminyaka elishumi elinanye eyadlulayo waba nethamsanqa lokuzimasa umboniso nguTom Bishop apho umsebenzi wobugcisa waboniswa ngokukodwa, okuncinci kumzekeliso kunye nokupeyinta. URothshanks wakhuthazwa ngumama wakhe ukuba athathe iitalente zakhe kwinqanaba lobungcali xa wayesele edlulile kwioyile kunye nomsebenzi weacrylic.
Kungenxa yoko le nto sinayo namhlanje kule ndawo siyaziyo kwi-Creativos ekwi-Intanethi nalapho sithanda ukuqaqambisa amagcisa afana noRothshank. Ufunde kwisikolo esiseCastine, eMaine, apho akwaziyo ukufundela phucula ubuchule bakho ekudaleni imifanekiso inokwenza nomncinci kunye nomncinci. Nantsi inxalenye yomsebenzi wabo.
Njengokuba esitsho, kwi-2014 wayenengxaki yokufumana ixesha, ngenxa yabantwana bakhe ababini, omnye uneminyaka esi-7 ubudala kwaye abanye babini, ukuze azikhuthaze ukuba avelise ngakumbi, uthathe isigqibo yenza into encinci yonke imihla. Oku kwamkhokelela ekubeni akwazi ukwenza imisebenzi emincinci ekumgangatho ophezulu kwaye wakwazi ukupeyinta enye yonke imihla ngaphandle kweengxaki ezinkulu.
Nganye yezi zinto ziphinda zenziwe ngokutsha zinakho thatha phakathi kwemizuzu engama-45 kunye neeyure ezi-4, kwaye njengoko ubona isikali ngu-1/12 nganye nganye. Iminwe yakhe iphawula ubungakanani baloo mizobo mincinci.
Sebenzisa Iphepha elimhlophe le-canson kushicilelo lwe «antique» kunye nebrashi entle yokufumana iinkcukacha nganye kwezi zinto zincinci, ezikumgangatho ophezulu. Usebenzisa i-iPhone yakhe ukuthatha iifoto athe wabelana ngazo kwi-Instagram apho anabalandeli abangama-68.300 nalapho angafumana khona umsebenzi, nangona okwangoku kungenakwenzeka, nangona esithi ngo-2017 uzakubuyela kuyo.
Unayo I-instagram yakhe for landela umsebenzi wakho omncinci kunye nokuveliswa okukhulu. Ukuba uyayithanda encinci, yiza apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Incinci kumzobo we Brook Rothshank
Ungaphila njani ngendlela esempilweni kunye nokuhlala ngokunyanzelwa ukuba uhlale umyili wemizobo